Mayelana NATHI - Xinxiang City Chengxin Vibration Equipment Co., Ltd.
Xinxiang City Chengxin Vibration Izinsiza kusebenza Co., Ltd.kuyinto nomkhiqizi professional imishini vibration futhi imishini imishini eChina. Inkampani yethu itholakala eXiaoji Economic Development Zone, eXinxiang City, eSifundazweni saseHenan, ehlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-80,000 nendawo yokwakha engama-60,000 square metres. Le nkampani yasungulwa ngonyaka we-2003 ngenhloko-dolobha ebhalisiwe yama-yuan ayizigidi ezingama-58. Ihlanganisa i-R & D, ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa. Imikhiqizo yayo isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izimayini, amalahle, amakhemikhali, izinto zokwakha, amandla, ubunjiniyela bemigwaqo kanye nebhuloho nezinye izimboni. Njengamanje, inkampani yethu inabasebenzi abangaphezu kuka-500 nochwepheshe abangaphezu kuka-80. Inkampani yethu ayiklonyeliswa kuphela njengebhizinisi lesifundazwe lobuchwepheshe obuphezulu, i-AAA credit enterprise, inkontileka yesifundazwe kanye nebhizinisi elithembekile nguMnyango WezeSayensi Nobuchwepheshe waseHenan, kodwa futhi lidlulise isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO kanye nesitifiketi se-CE esidingekayo semikhiqizo esetshenzisiwe i-EU.
I-Chengxin Vibration manje isiphenduke ibhizinisi elingokomfanekiso embonini futhi yaziwa ngamakhasimende amaningi. Eminyakeni yamuva nje, inkampani isungule ubudlelwane obubanzi bebhizinisi nezinkampani zamandla kagesi zasekhaya, ezifana ne-Wuhan Iron ne-Steel, i-Baosteel, i-Capital Iron ne-Steel, i-Jianlong Group, i-Jiuquan Iron ne-Steel, i-Yanshan Iron ne-Steel, i-Ganglu , noHanye. Ngaphezu kokunikezela ngezinkampani ezinkulu ezifuywayo, iChengxin Vibration iphinde ithumele eVietnam, Bulgaria, Abu Dhabi, Indonesia, Turkey, Botswana, Zambia, Cambodia, Guatemala nakwezinye izifunda. Le nkampani isungule ama-ejensi ezentengiso nezobuchwepheshe ezweni lonke, akha inethiwekhi yokuthengisa enamakhono aqinile wokuthuthukisa imakethe nohlelo oluphelele lokuphatha.
Eminyakeni edlule, i-Integrity Vibration ifinyelele izinga eliphakeme lokunemba, i-automation kanye nobuhlakani ekwakhiweni komkhiqizo nasekukhiqizeni. Ngasikhathi sinye, isungule uhlelo lokulawulwa kwemikhiqizo nokusebenza oluqondiswe ezimakethe olwenza ngcono ukusebenza kwempahla, ukugeleza kwemali nokuhamba kolwazi, futhi luzuze izinzuzo Ezinhle zezomnotho. Manje, izinzuzo eziphelele zezomnotho zenkampani, ucwaningo lwesayensi nobuchwepheshe namandla okuthuthuka, nokuncintisana kwemakethe yomkhiqizo kuphakathi kwezimbangi zomkhakha wasekhaya.
Imikhiqizo eyinhloko ekhiqizwe yi-Chengxin Vibration ifaka imikhakha eyisithupha: izikrini zokudlidliza, ama-conveyors, ama-crusher, ama-vibration motors, ama-vibers wokudlidliza kanye nezingxenye ezahlukahlukene zomkhiqizo. Le mikhiqizo yakhe uchungechunge olungaphezu kuka-20 olunezincazelo ezingaphezu kuka-400.
• Isikrini sokudlidliza: izikrini eziningi ezisebenza kahle kakhulu, izikrini zokuvikela imvelo eziguquguqukayo, izikrini eziphakelayo ezinobungani bemvelo, izikrini eziyindilinga eziyindilinga, izikrini eziqondile zokudlidliza, izikrini zokunwebeka zengalo, amakhaza abanda / ashisayo emayelana nezikrini, izikrini ezi-oval ezilinganayo, izikrini zamalahle powder, roller izikrini, Isikrini somanyolo, isikrini sokuhambisa amanzi, isikrini esigobile, isikrini se-sinusoidal, isikrini sokuphumula se-CZS, isikrini se-GTS chungechunge.
• Okuphakelayo: Uhlobo lwe-CZG feeder mass-vibrating feeder, feeder electromagnetic vibrating, belt / chain feeder, reciprocating coal feeder, CYPB quantitative disc feeder, FZC series vibrating machine mining, Screw conveyor, chain conveyor, vibration conveyor, belt conveyor, bucket elevator.
• Crusher: indandatho isando crusher, crusher esethola, Isigaxa crusher, umthelela crusher.
• Izingxenye ezingasebenzi: i-warehouse wall vibrator, i-CJZ isihlalo sohlobo lokudlidliza, i-oil oil vibrator amalahle grate, imoto yokudlidliza, isidlidlizi se-axis ekabili, nezinye izesekeli zomkhiqizo.
Selokhu yasungulwa, i-Integrity Vibration ihlale ibeka ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko endaweni yokuqala, futhi ngasikhathi sinye igxile ezimakethe futhi ithuthukisa ngenkuthalo ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko. Njengamanje, umklamo oqondile nowocwaningo lweChengxin Vibration unonjiniyela nochwepheshe abangaphezu kwama-80. Ngokungeniswa kobuchwepheshe kanye noshintsho kwezobuchwepheshe, inkampani iqinise ukubambisana kwezobuchwepheshe namayunivesithi asekhaya asaziwayo futhi yasungula isikhungo socwaningo lobuchwepheshe kanye nentuthuko. Inkampani itshala imali engaphezu kuka-10% yenzuzo yayo esikhungweni sokucwaninga ngesayensi minyaka yonke, futhi zonke izimali zisetshenziselwa ukuthuthukisa ubuchwepheshe, ngakho-ke isikhungo sokucwaninga sinemali eyanele.
Eminyakeni yamuva yesipiliyoni somsebenzi, kuhlanganiswe nobuchwepheshe obuthuthukisiwe ekhaya nakwamanye amazwe, i-Chengxin Vibration ithuthukise izikrini eziningi ezisebenza kahle, izikrini eziguquguqukayo zemvelo, nezikrini zokuphakela ezinobungani bemvelo ezihlangabezana nezidingo zemakethe. Ngasikhathi sinye, yonke imidwebo yenkampani iphethwe uhlelo lokuphathwa kwedatha lwe-PDM, olubona ukushintshaniswa kolwazi ngokwakhiwa, ukuphathwa, nokukhiqizwa, kuthuthukisa ukusebenza kahle kwebhizinisi, futhi kusheshise ijubane lokuthuthukiswa komkhiqizo.
Eminyakeni edlule, inkampani inqobile ukwesekwa nokwethenjwa kwamakhasimende amaningi ngokuhambisana nomgomo webhizinisi we "Phatha amakhasimende ngokukholwa okuhle, ngemikhiqizo ephelele yokuwina ukwethenjwa kwamakhasimende", imikhiqizo ithengisiwe ezweni lonke futhi kuthengiswa phesheya kwezilwandle, futhi kwamukelwe ngazwi linye ukudunyiswa!
Ukwethembeka kwakha uphawu, ukuqamba kwakha ikusasa.
Isibopho senhlangano kwezenhlalo
1. Ukukhathalela umphakathi
• Nikela ngezinto endaweni lapho zidingeka khona ngesikhathi sokubuyisela emphakathini.
• Sombulula ingxenye yenkinga yomsebenzi.
2. Ukunakekela imvelo
• Tshala imali enkulu ukukhuthaza ukuthuthukiswa kwemvelo. ukuvikela ubuchwepheshe, kanye neqhaza ekufezekisweni kwentuthuko esimeme
• Phendula obizweni lukazwelonke lokusebenzisa amandla ahlanzekile nokonga izinsiza zikazwelonke.
1. Hlakulela imodi yokuphatha engu-6S ukuqinisekisa ukuthi indawo yokusebenza ye-. abasebenzi bahlanzekile futhi bayasebenza.
2. Qinisa ukubambisana namanyuvesi, uthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo, futhi uvikele izintshisekelo zabathengi.
3. Ukusatshalaliswa kwenhlalonhle yabasebenzi ngamaholide.